Benin oo noqday xulkii ugu horreeyey ee iska xaadiriya wareegga siddeed dhammaadka koobka qarammada Afrika, kaddib markii reebeen Morocco… + SAWIRRO – Gool FM
Man City oo guul ka soo heshay kooxda Wolverhampton oo ay ku booqatay Molineux Stadium… +SAWIRRO
Benin oo noqday xulkii ugu horreeyey ee iska xaadiriya wareegga siddeed dhammaadka koobka qarammada Afrika, kaddib markii reebeen Morocco… + SAWIRRO
Haaruun July 5, 2019
(Qahira) 05 Luulyo 2019. Xulka Benin ayaa u soo baxay wareegga siddeed dhammaadka koobka qarammada qaaradda Afrika kaddib markii ay rigooreyaal kaga adkaadeen dhiggooda Morocco.
Kulankan oo ahaa mid aad u adag ayaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad xulka Benin ayaa goolka la horreeyey waxaana Morocco kaga naxsaday 53’daqiiqo Moise Adilehou, kaasoo ahaa goolkii ugu horreeyey ee laga dhaliyo wareegga 16-ka koobka qarammada qaaradda Afrika sanadkan 2019.
Xulka Morocco ayaa la yimid goolka barbaraha waxaana u dhaliyey 76’daqiiqo Youssef En-Nesyri, kulanka ayaana sidaas ku noqday gar isku mid ah 1-1.
Dhammaadkii ciyaarta xulka Morocco ayaa waxaa soo martay fursad dahabi ah kaddib markii loo dhigay gool ku laad, balse nasiib darro waxaa rigooradaasi ka khasaariyey oo birta ku dhuftay Hakim Ziyech, kulanka ayaana wakhtigii loogu talo galay ku soo dhammaaday barbaro 1-1.
Waxaa loo baahday in ciyaarta lagu kordhiyo 30’daqiiqo oo dheeri ah si loo kala saaro labada xul, laakiin 97’daqiiqo waxaa xulka Benin kaarka cas ka qaatay Khaled Adenon, kaddib markii loo taagay kaarkiisa labaad ee digniinta garoonka ayaana dibadda looga saaray.
Yeelkeede, xulka Benin waa is adkeeyey iyagoo kaarka guduudan laga qaatay, waxaana ciyaarta ay ku soo idleeyeen 30’kii daqiiqo ee lagu kordhiyey barbaro 1-1.
Markale ayaa loo baahday in labada xul lagu kala saaro gool ku laadyo waxaana rigooreyaashii loo dhigay 1-4 ku adkaaday xulka Benin oo sidaas ku reebay Morocco.
Benin ayaana sidaas ku noqday xulkii ugu horreeyey ee iska xaadiriyey siddeed dhammaadka Koobka qarammada qaaradda Afrika 2019.
Frenkie de Jong oo lagu soo bandhigay garoonka Camp Nou... + SAWIRRO
Atlético Madrid oo si kulul u weerartay Barcelona, kaddib war rasmi ah ay kasoo saartay arrinta Griezmann